Zimbabwe -- The East African, Nairobi - allAfrica.com
Botswana President Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi will visit two countries one week after his inauguration. Read more »
Zimbabwe: 15 People Die of Mushroom Poisoning in Zimbabwe
At least 15 people have died of mushroom poisoning in Zimbabwe with one family losing four members, officials said on Friday. Read more »
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa met with his Zambian counterpart Edgar Lungu at State House in Lusaka on Friday. Read more »
Zimbabwe: Mnangagwa Promises Free and Fair Poll in Zimbabwe
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa on Thursday vowed to hold free and fair elections next year, warning his party the contest was "nearer than what you expect". Read more »
Uganda: Mugabe's Exit Causes Excitement in Uganda
As Zimbabwe, and Africa at large, comes to terms with the unexpected fall of Robert Mugabe, Kampala, more than any other capital in East Africa is following the events in Harare… Read more »
Zimbabwe: Zimbabweans Yearn for Change Despite President Mnangagwa's Dark Past
Zimbabwe's new president is known as the crocodile by his supporters because of his reputation as a cunning and sometimes ruthless politician. Read more »
With the exit of Robert Mugabe, will the former Ethiopian dictator, Mengistu Haile Mariam, continue enjoying asylum in Zimbabwe? Read more »
Zimbabwe: Where Will Mugabe Spend His Twilight Days?
Former Zimbabwe President Robert Mugabe made enemies in world politics during his 37-years at the helm, thanks to his sharp tongue. Read more »
South Africa: Zuma Skips Mnangagwa's Inauguration
South African President Jacob Zuma will not attend the inauguration ceremony of Zimbabwe's new president. Read more »
On the eve of the swearing in of Zimbabwe's next leader Emmerson Mnangagwa, focus is turning to the fate of former first lady Grace Mugabe. Read more »
The military on Friday changed tack in its determination to remove Zimbabwe President Robert Mugabe from office after he firmly resisted any deal that would prematurely end his… Read more »
Botswana's President Ian Khama says Zimbabwe's veteran leader Robert Mugabe needs to step down from power. Read more »
Zimbabwe's military on Friday said it was making progress in its negotiations with President Robert Mugabe after demanding that he steps down. Read more »
South Africa's opposition party, the Congress of the People (Cope), has rejected calls to offer Zimbabwean President Robert Mugabe political asylum in the country. Read more »
Zimbabwe's leading opposition figures on Thursday backed the military's move to remove President Robert Mugabe as the besieged ruler and the generals continued with their delicate… Read more »
South Africa's ruling African National Congress (ANC) has distanced itself from the Zimbabwe crisis, saying it will not get involved in the rift. Read more »
Zimbabwe: Fired VP 'Blocked' From Leaving the Country
Zimbabwe's ousted Vice-President Emmerson Mnangagwa was blocked from leaving the country, a day after President Robert Mugabe fired him for 'disloyalty and deceit', reports said on… Read more »
Zimbabwe: Voters Given Rice Pledge for Numbers
The Zimbabwean government will award 300 tonnes of rice to the top 10 districts that mobilise the most people to register as voters ahead of next year's election. Read more »
Zimbabwe: Outrage Greets Zimbabwe's First Donkey Abattoir
Animal rights groups in Zimbabwe are resisting the opening of the country's first ever donkey abattoir, saying such a venture will wipe out the animals and impoverish communities. Read more »
Zimbabwe: Zimbabwe to Rename Harare Airport After Mugabe
Zimbabwe will in November rename its main airport after the country's long-serving ruler, President Robert Mugabe. Read more »
South Africa: Grace Mugabe's South Africa Assault Case 'Far From Over'
The Grace Mugabe assault case in South Africa appears to be far from over. Read more »
Zimbabwe: 11 Burnt Beyond Recognition in Zimbabwe Crash
Eleven people were burnt beyond recognition after two vehicles collided and burst into flames in Harare. Read more »
Malawi: Malawian Bank Acquires Barclays Zimbabwe
A Malawian bank has bought a majority stake in Barclays Plc's Zimbabwean unit. Read more »
Zimbabwe: Cholera Kills Two in Zimbabwe
Two people have died of cholera in Zimbabwe and several others have been hospitalised as the southern African country battles the aftermath of floods. Read more »
Zimbabwe: Zimbabwe Pleads for Aid As Rains Wreak Havoc
Zimbabwe has appealed for $100 million help for people affected by floods amid reports that 246 others have died and 2,000 have been left homeless since heavy rains began in… Read more »